Iindawo eziManyeneyo eziPhambili16000, 16500, 17000
Imimandla yenkxaso ephambili13500, 13000, 12500
I-NASDAQ 100 (NAS100) yexesha elide iTrend: Bearish
I-NAS100 is in a downward move. The index is above the 50-day line SMA but below the 21-day SMA. NAS100 will further decline to level 14400 if the bears break below the 50-day SMA. On the other hand, if the current support holds, the uptrend will resume. Besides, the market has reached the oversold region and has pulled back. The index is likely to revisit the previous highs. A break above the 21-day SMA will signal the resumption of upside momentum.
I-NAS100- Itshathi yemihla ngemihla
I-NASDAQ 100 (NAS100) yeNdlela yeXesha eliphakathi: Ukuthwala
Iindawo eziNkxaso eziPhambili: 13500, 13000, 12500
I-NAS100 ikwintshukumo esezantsi njengoko ixabiso lehla ngaphantsi kwe-avareji ehambayo engama-21. Imarike kusenokwenzeka ukuba iyancipha ngakumbi kwinkxaso engaphezulu kwe-50-day SMA. Ukuba ixabiso libambe ngaphezulu kwe-SMA yeentsuku ezingama-50, i-NASDAQ 100 iya kuqalisa uhambo oluya kuluhlu phakathi kwemiyinge ehambayo.
Isalathiso sikwinqanaba lama-49 leSalathiso saMandla esiLalelanayo kwixesha le-14. Ibonisa ukuba kukho ukulingana phakathi konikezelo kunye nemfuno. Ixabiso le-cryptos lingaphantsi kwe-avareji yeentsuku ezingama-21 kwaye ngaphezulu kwe-avareji ye-50-day ehambayo ebonisa ukuhamba okunokwenzeka koluhlu. I-SMA yeentsuku ze-50 kunye ne-21-day SMA zihla zinyuka zibonisa ukunyuka.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-NAS100 ikwintshukumo esezantsi. Ixabiso lesalathisi liphule ngaphantsi kwee-avareji ezihambayo. Ikwaphuke ngezantsi komgangatho ophantsi wangaphambili kwinqanaba le-16104. Kukho ithuba lokuhla ngakumbi. Okwangoku, ngoNovemba 23 downtrend, i-candle body retraceed ivavanye i-61.8% ye-Fibonacci ye-retracement level. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-NAS100 iya kuwela kwinqanaba le-1.618 isandiso seFibonacci okanye inqanaba le-15702.64.
I-NAS100 ingaphantsi kwe-25% uluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Imakethi ikwisantya se-bearish kwaye isondela kwindawo ethengiwe kakhulu. I-SMA yeentsuku ze-21 kunye ne-50-day SMA zihla zinyuka zibonisa ukuhla.
I-NAS100 iphinde yaqala phantsi. Isalathiso sinokuthi sihla ngakumbi kwi-downside. Ngokutsho kwesixhobo seFibonacci, i-NAS100 iya kuwela kwinqanaba le-1.618 isandiso seFibonacci okanye inqanaba le-15702.64. Kweli nqanaba lisezantsi, isalathiso besiya kuwa kwindawo ethengisiweyo yemarike.
I-NASDAQ 100 (NAS100) iFikelela kwiNgingqi eThengi kakhulu, iNqanaba ekujoliswe kulo 16906
Iindawo eziKhuselekileyo: 15000, 15500, 16000
I-NASDAQ 100 (NAS100) yexesha elide iTrend: Bullish
I-NAS100 iqhubekile nokunyuka phezulu. Isalathisi sithengisa kwinqanaba le-16585 ngexesha lokubhala. Okwangoku, ngoNovemba 8 uptrend, i-candle body retraceed yavavanya i-78.6% ye-Fibonacci ye-retracement level. Ukubuyiswa kubonisa ukuba i-NAS 100 iya kunyuka kodwa iya kuguqula kwinqanaba le-1.272 i-Fibonacci extension okanye inqanaba le-16906.38.
Isalathiso sikwinqanaba lama-74 leSalathiso saMandla aManyanisiweyo kwixesha le-14. Imarike ifikelele kwingingqi ethengwe ngokugqithisileyo. Abathengisi baya kuvela ukutyhala amaxabiso ezantsi. I-SMA yeentsuku ze-50 kunye ne-21-day SMA zihla zinyuka zibonisa ukunyuka. Ixabiso lesalathisi lingaphezulu kwee-avareji ezihambayo emva kokubuyisela.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-NAS100 ikwintshukumo ephezulu. I-uptrend entsha iphule ngaphezu kokuchasana kwi-16400 kwaye iphinde yaqala phezulu. Ukunyuka kokunyuka kuyathandabuzeka njengoko amaxabiso efikelela kwindawo ethengwe ngokugqithisileyo.
I-NAS100 ingaphezulu koluhlu lwe-80% yestochastic yemihla ngemihla. Imakethi ikwisantya se-bullish kwaye isondela kwindawo ethengwe ngokugqithisileyo. I-SMA yeentsuku ze-21 kunye ne-50-day SMA zihla zinyuka zibonisa ukunyuka.
I-NAS100 iphinde yaqala ukuya phezulu. Nangona kunjalo, isalathisi ngoku sithengisa kummandla othengiwe kakhulu. Isalathisi se-RSI sikwinqanaba le-74. I-NAS 100 ikwimeko ethengwe ngokugqithisileyo. Kukho ukuthambekela kwesalathiso sokwehla.
I-NASDAQ100 (NAS100) Ifikela kwiNgingqi eBotyiswe kakhulu, iDowntrend isondele
I-NAS100 ibikwi-uptrend. Isalathisi sifikelele kwinqanaba eliphezulu le-16469 kodwa lijongene nokulahlwa. Iimpawu zexabiso zibonise ukuba isalathisi sinobunzima kummandla ogqithisiweyo. Kuyathandabuzeka ukuba isantya se-bullish sangoku siya kuqhubeka. Imarike ngoku iyehla kwaye inokufikelela kwinqanaba elisezantsi le-15400.
Isalathiso sikwinqanaba lama-75 loBulunga obunxulumeneyo kwixesha le-14. Isalathiso sifikelele kwingingqi ethengwe ngokugqithisileyo kwimarike. Abathengisi baye bavela kummandla othengiwe kakhulu. Iikhandlela ze-Bearish zibonisa intshukumo ehlayo. Imivalo yexabiso ingaphezulu kwe-50-day SMA kunye ne-21-day SMA. Nangona kunjalo, i-downtrend iya kuphinda iqalise ukuba ixabiso liyaphuka ngaphantsi kwee-avareji ezihambayo.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-NAS100 ikwi-uptrend egudileyo. Isenzo sexabiso siye salawulwa ngamakhandlela amancinci omzimba. Isalathiso siwela njengoko sisondela kumgca we-21 weentsuku ze-SMA. Ikhefu elingaphantsi komyinge ohambahambayo liya kukhawulezisa uxinzelelo lokuthengisa.
Isalathiso singaphezulu koluhlu lwe-80% yestochastic yemihla ngemihla. Ukususela ngo-Oktobha 25, isalathisi siye sarhweba kwindawo ethengiwe kakhulu. Iibhanti zestochastic zihamba ngaphantsi kwe-80% yoluhlu lwexabiso lexabiso. I-SMA yeentsuku ze-21 kunye ne-50-day SMA zihla zinyuka zibonisa ukunyuka.
I-NAS100 ikwi-uptrend eyomeleleyo kodwa ukunyuka okunyukayo kufikelele ekudinweni kwe-bullish. I-Relative Strength Index ifikelele kwinqanaba eliphezulu le-79. Oku kuthetha ukuba i-NAS100 ayinakuqhubeka nokuqhuba kwe-bullish. Ukuhla ukuhla kusondele.
I-NASDAQ 100 (NAS100) iqhubela phambili, iNqanaba ekujoliswe kulo 16059
Ukusukela nge-13 ka-Okthobha, I-NAS100 ibikwi-uptrend. Ukunyuka okunyukayo kukhawuleziswa njengoko ixabiso lidlula ngaphezu kwee-avareji ezihambayo kunye nokuchasana kwinqanaba le-15600. Okwangoku, ngo-Oktobha 7 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-38.2% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyiswa kwakhona kubonisa ukuba i-NAS100 inokuthi inyuke ukuya kwinqanaba le-2.618 yezandiso zeFibonacci okanye inqanaba le-16059.88.
Isalathiso sikwinqanaba le-70 lexesha le-Relative Strength 14. Isalathiso sifikelele kwingingqi ethengwe ngokugqithisileyo kwimarike. Abathengisi banokuthi bavele kummandla othengiwe ngokugqithisileyo.NAS100 ikwindawo ekwi-uptrend zone kwaye iphinde yaqalisa ukunyuselwa phezulu. Imivalo yexabiso ingaphezulu kwe-50-day SMA kunye ne-21-day SMA ebonisa ukuba isalathisi siyakwazi ukunyuka phezulu.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-NAS100 ikwi-uptrend egudileyo. Umgca wokuhamba kwe-bullish uzotywe ubonisa amanqanaba enkxaso yamaxabiso. Imakethi ifikelele kwindawo ethengwe ngokugqithisileyo kwimarike.
Isalathiso singaphezulu koluhlu lwe-80% yestochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba imakethi ikummandla othengwe kakhulu. Abathengisi banokuthi bavele kummandla othengiwe ngokugqithisileyo I-21-day SMA kunye ne-50-day SMA ihlahlela phezulu ibonisa ukunyuka.
I-NAS100 ikwi-uptrend eyomeleleyo. Isalathisi sifikelele kummandla othengwe ngokugqithisileyo. Ukuya phezulu ukuya phezulu kuyathandabuzeka. I-Fibonacci ibonise ukuba i-NAS100 inokuthi iphakame kwinqanaba le-2.618 i-Fibonacci extensions okanye inqanaba le-16059.88.
I-NASDAQ 100 (NAS100) iphinda iqale i-Uptrend, ijongene nokulahlwa kwinqanaba le-15500
Iindawo eziManyeneyo eziPhambili15000, 15500, 16000
I-NAS100 iye yaqhubeka inyuka ngokunyuka njengoko ixabiso liqhekeza ngaphezu kwee-avareji ezihambayo. Imarike iphakama kwaye isondela kwinqanaba lokumelana ne-15600. I-NASDAQ iya kuhlanganisana kwinqanaba le-18000 ukuba ukuchasana kwi-15500 kuphulwa. Okwangoku, ngo-Oktobha 7 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-38.2% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-NAS100 inokuthi inyuke ukuya kwinqanaba le-2.618 yezandiso zeFibonacci okanye inqanaba le-16059.88.
Isalathiso sikwinqanaba le-58 lexesha le-Relative Strength 14. I-NAS100 ikwindawo ye-uptrend kwaye iphinde yaqala phezulu. Imivalo yexabiso ingaphezulu kwe-50-day SMA kunye ne-21-day SMA ebonisa ukuba isalathisi siyakwazi ukunyuka phezulu.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-NAS100 iphinde yaqala ukuya phezulu. I-uptrend ijongene nokuchasana kwinqanaba le-15500. Ukususela ngo-Oktobha 19, ukunyuka okunyukayo kuye kwagxininiswa ngaphantsi kwephezulu yakutshanje.
Isalathisi singaphantsi kwe-20% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba imakethi ikummandla othengisiweyo kakhulu. Abathengi banokuthi bavele kummandla othengisiweyo I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye ne-50 yeentsuku ze-SMA zihla zinyuka zibonisa ukunyuka.
I-NAS100 inyukele kwinqanaba le-15500 kodwa ijongene nokukhatywa. Ukuqhubela phambili ukuya phezulu kunokwenzeka ukuba ukuchasana kwangoku kwaphulwa. Isalathiso sibonisa ukuba i-NAS100 inokuthi iphakame kwinqanaba le-2.618 i-Fibonacci extensions okanye inqanaba le-16059.88.
I-NASDAQ 100 (i-NAS100) iqala kwakhona ukuya phezulu, ukuHanjiswa koLwaphulo kwiNqanaba 15000
I-NAS100 uqalise kwakhona ukunyuka okunyuka njengoko amaxabiso eqhekeka ngaphezulu komndilili weentsuku ezingama-21 ezihambayo. Ukuba iinkunzi zeenkomo ziye zaphuka ngaphezulu komndilili weentsuku ezingama-50 ezihambayo, i-NASDAQ iya kuba kwindawo yokuqhubela phambili. Isalathiso siya kuphakama ukuzama ukuphinda amanqanaba angaphambili kwinqanaba le-15600. Ngeli xesha, ngo-Okthobha u-7 uptrend, umzimba wekhandlela obuyise umva kuvavanywa inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci ye-38.2%. Ukubuyiselwa endaweni kubonisa ukuba i-NAS100 inokuthi inyuke iye kwinqanaba le-2.618 yeFibonacci eyandisiweyo okanye inqanaba le-15977.37.
I-NAS100 -Itshathi yansuku zonke
Isalathiso sikwinqanaba lama-54 lexesha lamandla ahlobene no-14.I-NAS100 ikummandla ophakamileyo kwaye iqale ngamandla kwakhona. Imivalo yamaxabiso ingaphantsi kweentsuku ezingama-50 ze-SMA kodwa ngaphezulu kweentsuku ezingama-21 ze-SMA.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-NAS100 iqale kwakhona ukunyuka njengoko amaxabiso esaphula ukuxhathisa kwinqanaba le-15000. I-NAS100 inyuka ukuphinda iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde isetyenziswe ngo-15400. . Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-NAS7 inokuthi inyuke iye kwinqanaba le-38.2 yokwandiswa kweFibonacci okanye inqanaba le-100.
Isalathiso singaphezulu kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba imarike ikummandla othengwe ngaphezulu. Ukusukela nge-14 ka-Okthobha, i-NAS100 sele ithengisa kwindawo ethe kratya yentengiso. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zitshibilika zisiya phezulu zibonisa uptrend.
I-NAS100 iphinde yaqala ukunyuka inyuka njengenqanaba le-14400 lenkxaso. Iimarike ziya kufikelela kummandla we-uptrend ukuba iinkunzi zeenkomo zaphula umyinge weentsuku ezingama-50 ezihambayo. Okwangoku, isalathiso siya kunyuka siye kwinqanaba le-2.618 yokwandiswa kweFibonacci okanye inqanaba le-15884.12.
I-NASDAG 100 (NAS100) ibambe ngaphezulu kwenqanaba le-14400, ifikelela kwi-Bearish Exhaustion
Ukusukela nge-7 kaSeptemba, I-NAS100 ibikade ikwi downtrend. Isalathiso siwele emazantsi e-14356 njengoko iinkunzi zazithenga iidiphu. Ixabiso lilungiswe phezulu emva kokuwa kwinqanaba eliphantsi elingaphezulu kwe-14400. Ukulungiswa okuphezulu kwagxothwa kwinqanaba le-15000. Intsingiselo kukuba uxinzelelo lokuthengisa luza kuphinda luqale. Okwangoku, nge-20 kaSeptemba ye-downtrend, umzimba wekhandlela obuyise umva kuvavanywa inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-50%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-NAS100 inokuthi iwele kwinqanaba le-2.0 Fibonacci extensions okanye kwinqanaba le-13863.27. Ukusuka kwintengo yamaxabiso, intengiso yafikelela kwinqanaba eliphantsi le-14400 yabuya umva.
Isalathiso sikwinqanaba le-44 leXesha laMandla aNxulumene noko i-NAS14 ikummandla we-downtrend kwaye inakho ukuwela kwicala elingaphantsi. Imivalo yamaxabiso ingaphantsi kwe-100-day SMA kunye ne-50-day SMA ebonisa ukwehla.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-NAS100 isezantsi. Isalathiso siwele kwinqanaba le-14360 kabini kwaye saphinda sahlanganiswa kwakhona. Ukuba amaxabiso aphule ngezantsi kwenkxaso yangoku, uxinzelelo lokuthengisa luya kuphinda luqale. Okwangoku, nge-4 ka-Okthobha i-downtrend, umzimba wekhandlela obuyise umva kuvavanywa inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-50%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-NAS100 inokuthi iwele kwinqanaba le-2.0 yokwandiswa kweFibonacci okanye inqanaba le-13351.56.
Isalathiso singaphezulu kwoluhlu lwama-40% lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba intengiso ikwindawo yokuqhubela phambili. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zijonge ezantsi zibonisa ukwehla.
Ukusukela nge-4 ka-Okthobha, i-NAS100 ibisoloko iguquka ngaphezulu kwenqanaba le-14400. Okwangoku, isalathiso sisathengisa kwindawo yedowndrend. Okwangoku, i-NAS100 ijongene nokwaliwa kwinqanaba le-15000. Isixhobo seFibonacci sibonakalise ukuhla okunokwenzeka kwinqanaba le-13351 okanye le-13863
I-NASDAQ 100 (NAS100) ifikelela kuMmandla oGqithisileyo njengoko ime kwiiNqanaba eliPhezulu
Isalathiso seNAS100 ibikukuhla okumazantsi emva kokufikelela kwinqanaba lexabiso eliphakamileyo kwinqanaba le-15711. Imakethi iye yehla kwi-bearish trend zone njengoko iibhere zaphuka ngaphantsi kwemilinganiselo ehambayo. Uxinzelelo lokuthengisa lukhawulezisiwe njengoko ixabiso lifikelele kwinqanaba eliphantsi le-14356. Ukunyuka okuthe kratya kusenokwenzeka ngenxa yokwaliwa kwinqanaba le-14800. Ngeli xesha, nge-20 kaSeptemba yedowntrend, umzimba wekhandlela obuyise umva kuvavanywa inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-50%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-NAS100 inokuthi iwele kwinqanaba le-2.0 Fibonacci extensions okanye kwinqanaba le-13895.87.
I-NAS100 ikwinqanaba lama-29 lamaxesha aMandla aNxulumene noko 14. Ibonisa ukuba intengiso ifikelele kummandla othengisiweyo. Intsingiselo kukuba ukuthengisa uxinzelelo kuye kwaphela. Abathengi kunokwenzeka ukuba bavele kwingingqi ethe kratya ukutyhala amaxabiso ezantsi. Imivalo yamaxabiso ingaphantsi kwe-50-day SMA kunye ne-21-day SMA ebonisa ukwehla.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-NAS100 isezantsi. I-downtrend yanyuswa emva kokwaliwa kwinqanaba le-15400. Ngeli xesha, nge-30 kaSeptemba yedowntrend, umzimba wekhandlela owabuyisa umva wavavanya inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci eyi-78.6%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-NAS100 inokuthi iwele kwinqanaba le-1.272 yokwandiswa kweFibonacci okanye inqanaba le-14313.89.
Isalathiso singaphantsi kwe-20% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba intengiso ifikelele kummandla ogqithileyo. Kwakhona, uxinzelelo lokuthengisa lufikelela ekudinweni kwe-bearish. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zijonge ezantsi zibonisa ukwehla.
I-NAS100 ifikelele kwindawo ethe kratya kwintengiso. Ukudodobala kunokwenzeka ukuba kwehle. Njengoko abathengi bevela, ukunyuka okuphezulu kuya kuqhubeka. Imakethi iqale ukubamba ngaphezulu kwenqanaba le-14400.
I-NASDAQ 100 (NAS100) ibuyisa kwakhona kwi-Downtrend kodwa iMfazwe yokuXhathisa kwinqanaba le-15300
Ukuhlaziywa: 26 Septemba 2021
Isalathiso seNAS100 uqalise kwakhona ukunyuka okuphezulu emva kokuba iwele kwinqanaba eliphantsi le-14800. Umfutho ophuculweyo uqhekeke ngaphezulu kwe-50-day SMA. Isalathiso siyenyuka kwaye sisondela kwi-21-day SMA. Ikhefu elingaphezulu kweentsuku ezingama-21 ze-SMA liya kuqhubela phambili isalathiso ukuba sinyuke ngaphezulu. Okwangoku, i-NAS100 inyukele kwinqanaba le-15311 ngexesha lokubhalwa.
I-NAS100 ikwinqanaba lama-50 lexesha laMandla aNxulumene noko 14. Ibonisa ukuba kukho ulungelelwaniso phakathi konikezelo kunye nemfuno. Ixabiso lesalathiso liphula umgca wokumelana nejelo elihlayo. Ukuba izibane zivaliwe ngaphezulu komgca wokumelana, uptrend uya kuqhubeka ngaphezulu. I-SMA yeentsuku ezingama-50 kunye neentsuku ezingama-21 ze-SMA zithambekele phezulu zibonisa ukuba phezulu.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-NAS100 ikwi-uptrend. Kwi-uptrend yokuqala, isalathiso safikelela kwinqanaba eliphezulu le-15330 kodwa sagxothwa. Imarike yenqabile ukuya kwinqanaba le-15200 kwaye yaqala kwakhona i-uptrend. I-NAS100 iyenyuka ukuzama ukuphakama kwakhona. Ngeli xesha, ngoSeptemba 23 uptrend, umzimba wekhandlela owabuyisa umva wavavanya inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci eyi-78.6%. Ukubuyiselwa endaweni kubonisa ukuba i-NAS100 inokuthi inyuke iye kwinqanaba le-1.272 yolwandiso lweFibonacci okanye inqanaba le-15448.27.
Isalathiso singaphezulu kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba imarike ifikelele kwingingqi ethengiweyo. Kwakhona, uxinzelelo lokuthengisa lufikelela ekudinweni kwe-bearish. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zitshibilika zisiya phezulu zibonisa uptrend.
I-NAS100 ibuyile ukusuka ezantsi njengexabiso lamaxabiso ngaphezulu kweentsuku ezingama-50 zeSMA. Abathengi batyhale isalathiso kwinqanaba eliphezulu le-15311. NgoSeptemba 6, abathengi batyhala isalathiso kwinqanaba eliphezulu le-15711 kodwa bagxothwa.